Ọsọ ịgba egwu – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Chọrọ ịnụ ụtọ egwu mana ụzọ ochie ahụ na -agwụ ike? Sonyere anyị n'ọsọ ịgba egwu, ihe egwu na -atọ ụtọ egwu ejiji ije egwuregwu!
Oge izizi ị nwere ike ịnụ ụtọ ijegharị ụkwụ n'ikiri ụkwụ. Naanị na agbụrụ ịgba egwu!
Chịkọta ọtụtụ ikiri ụkwụ dị ka ị nwere ike n'okporo ụzọ awara awara iji bụrụ eze nwanyị egwuregwu ikiri ụkwụ dị elu. Kpachara anya! Ị ga -eri ahụ egwuregwu ikiri ụkwụ a dị ịtụnanya na -atọ ụtọ. Nke dị elu n'ikiri ụkwụ gị, ka ị ga -enwe ohere ịbanye na ikpo okwu. Oge erugo igosi ọha mmadụ nwere ụkwụ ụkwụ zuru oke!!
Jide ma dọkpụrụ ịnakọta ikiri ụkwụ dị ka ị nwere ike. Chee na ọ dị mfe? Ị chọrọ. Ka ị na -agafe ọkwa, egwuregwu ga -esi ike. Mgbidi ịwụli elu, rails n'elu ụlọ ebe ị ga -agbatị ụkwụ gị na mmịfe – nke ahụ bụ naanị ọkara ụwa dị ịtụnanya na -echere gị.
Features Atụmatụ egwuregwu:
– Ụdị agwa dị iche iche, akpụkpọ ụkwụ, akwa akpụkpọ ụkwụ
– Egwuru egwu ndị a na -ewu ewu kwekọrọ na isiokwu mara mma
– Ọtụtụ ọkwa nke nsogbu na -abawanye na akụkọ nke ha
– Ọdịdị dị elu na ụdị egwu dị iche iche nke dabara ụtọ ụtọ egwu dị iche iche.
Ị dịla njikere isonye n'egwuregwu egwu egwu a? Budata ugbu a ka ị hụ ihe mere n'ezie!
← Ndị nwere ọgụgụ isi & Bara nnukwu uru – Dakọtara 3 Ndị aghụghọ egwuregwu&Mbanye anataghị ikike Ogbugbu Midsomer: Okwu, Mpụ & Ndị aghụghọ nzuzo&Mbanye anataghị ikike →